RW Rooble oo loo adeegsanyo qorshaha muddo kordhinta | KEYDMEDIA ONLINE
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, oo hirgalinaya qorshe ay abaanushay Madaxtooyada ayaa kulamo siyaasadeed ka billaabay Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sii-hayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa maanta la kulmay qaar ka mid ah Madaxda Xisbiyada siyaasadda, ee la dhacsan Maamulka uu waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo hoggaamiyo.
Ra’iisul Wasaare Rooble, oo ah wasiirka koobaad ee Xukuumadda xil-gaarsiinta ayaa Madaxtooyadu qorsheysay in ay u adeegsato hirgalinta muddo korrsiga uu doonayo Madaxweynaha waqtigu ka dhmaaday Farmaajo, si uu ugu sii fadhiyo kursiga.
Waxay u muuqataa inuu meesha ka baxay muddo kardhin la doonayay inuu hor kaco Guddoomiyaha Golaha Sacabka ee waqtigu ka dhamaaday, Maxamed Mursal, Kadib cadaadis xoogan oo ka yimid Wakiillada Beesha Caalamka ee jooga Soomaaliya, buuq iyo xasaradana ka billowdeen gudaha xarunta Baarlamaanka.
Sida ay xiqiijinayaan ilo xog-ogaal ah, oo ku sugan Madaxtooyada Soomaaliya, Xukuumadda uu Rooble hoggaamiyo ayaa dhawaan looga yeeri doonaa Baarlamaanka, waxana la fari doonaa in ay soo diyaariyaan heshiis doorasho, madaama kuwii hore fashilmeen, waa sida ay ku heshiiyeen Fahad, Farmaajo, Rooble iyo Mursal, kadibna Xuuumaddu waxa ay soo gudbin doontaa heshiis haddaba diyaarsan oo nuuciisu yahay hannaanka doorasho ee Xisbiyada badan.
Iyadoo fulinta qorshahaas la hirgalinayo Rooble ‘Rogane’ ayaa galabta la kulmay qaar ka mid ah Madaxda Xisbiyada aan saameynta badan lahayn, sida lagu sheegay war ka soo baxay Dowladda.
“Ra’iisul Wasaaraha ayaa la kulmay qaar ka mid ah madaxda Xisbiyada siyaasadda dalka oo uu warbixin ka siiyay dadaallada dowladda ee doorashooyin dalka ka qabsooma & caqabadaha jira, isagoo ka dhageystay talooyinkooda ku aaddan doorasho daahfuran oo dalka ka dhacda”. Ayaa lagu yiri warka Dowladda.
Qorshahaan oo Kooxda waqtigu ka dhamaaday hoosta ku heysatay muddo dheer ayay hadda u adeegsan doonaan Plan B, Kadib markii ay ku fashilmeen in ay dalka ka qabtaan doorashadii dadbaneed ee lagu heshiiyay 17-kii September 2020.